राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत प्रगति - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएकाे छ । पाँचौ वर्ष प्रवेशको अवसरमा प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना मार्फत आफ्नो प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछिको राहत, उद्धार र त्यसपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा मिडियाले पुर्याएको योगदानमा सहयोग गर्ने प्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना हुँदासम्म भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्राधिकरणले चौथो वर्ष पार गर्दा पुनर्निर्माणमा प्राप्त ८३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको जनाएको छ । स्थानीय समुदाय, तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी क्षेत्र, विभिन्न संघरसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक प्रयास र मेहनतका बाबजुद उपलब्धी हासिल गरेको जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माणका क्रममा रहेका सहित चार वर्षमा ६ वटा क्षेत्रमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेकाे जनाएकाे छ । जसमा ६९ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेकाे बताएकाे छ । १४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा रहेकाे उल्लेख गरेकाे छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकाे उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएकाे छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएका कुल ७ लाख ८० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख ८४ हजार ३ सय ८३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेकाे छ । जुन अनुदान सम्झौता गरेका उल्लेखित लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो । १ लाख ८९ हजार ४१ वटा घर बन्दैछन्, यो २४ प्रतिशत हो। निजी आवास सम्बन्धी करिब चार लाख गुनासो सुनुवाइ गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा जनाएकाे छ।
कुल क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय मध्ये ५ हजार ३ सय ८० अर्थात ७१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १७ सय ८७ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएकाे छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन जस्ताकाे त्यस्तै,
मिति : २०७६/९/१०
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्ष पूरा गरी पाँचौ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। २०७२ सालको भूकम्पपछिको राहत, उद्धार र त्यसपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा मिडियाले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आगामी दिनमा पनि उत्तिकै सहयोग हुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु।
भूकम्पपछि हामी सबै भयावह र कहालीलाग्दो अवस्थामा थियौं। आत्मविश्वास, आशा र अपेक्षा गुमाएका थियौं। २०७२ साल पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना हुँदासम्म भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण हुन सक्नेमा संशय व्यक्त गर्दै थियौं। शुन्यबाट काम सुरु गरेको प्राधिकरणले चौथो वर्ष पार गर्दैगर्दा भने हामी पुनर्निर्माणमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यो तपाईँ हामी, स्थानीय समुदाय, तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक प्रयास, मेहनत, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको परिणाम हो।
पुनर्निर्माणको चार वर्ष पूरा गर्दाको यस अवसरमा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य स‌ंस्था, सम्पदा, सरकारी भवनहरु र सुरक्षा निकायका भवनहरुमा क्षति पुगेको थियो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माणका क्रममा रहेका सहित हामीले चार वर्षमा ६ वटा क्षेत्रमा औसतमा 83 प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छौं, जसमा 69 प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेका छौं भने १4 प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। भूकम्पबाट तहसनहस भएका संरचनालाई अहिले सुरक्षित र आकर्षक रुपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र हुँदै गरेका संरचनाले प्रतिस्थापन गर्दैछन् ।
पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका सहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएका कुल ७ लाख ८० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख 82 हजार ३ सय 23 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जुन अनुदान सम्झौता गरेका उल्लेखित लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो ।१ लाख ८९ हजार ४१ वटा घर बन्दैछन्, यो २४ प्रतिशत हो। निजी आवास सम्बन्धी करिव चार लाख गुनासो सुनुवाइ गरेका छौं ।
कुल क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ३ सय ८० अर्थात ७१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १७ सय ८७ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ, जसलाई विद्यालयको भौतिक स‌ंरचना सुधारमा अभूतपूर्व उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ।
त्यस्तै ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ सम्पदामध्ये ३ सय ८७ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। १ सय २३ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।
कुल ११ सय ९७ वटा मध्ये ६ सय ६५ स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ। १ सय ४९ वटा बन्दैछन्।
पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति भएका कुल ४ सय १५ सरकारी भवन मध्ये ३ सय ५९ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ४९ वटाको काम जारी छ।
सुरक्षा निकायका १ सय ८३ वटा संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ वटा बन्दैछन्।
भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद/व्यवस्थापन गरिएको छ।
४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृति भइसकेको छ । त्यसमध्ये २२ वटाको काम सुरु भएको छ भने तीनवटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३ सय १९ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
त्यस्तै यसबीचमा खानेपानी विभागमार्फत ७ सय ९१ वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन भने ६ सय ७० वटा योजनाहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूपा, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दि बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसुति गृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जंङ्गीअड्डा लगायतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग), दरबार हाइस्कूल जस्ता मुख्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यस्तै गुम्बा पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाइएको छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब रुपैयाँ गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा केही पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन्। भूकम्प प्रतिरोधी स‌ंरचना बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। विपद्को जोखिममा रहेको हाम्रो देशमा यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो। हामीले बैंकमार्फत् अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलायौं। यसले सुशासन र पारदर्शिता त कायम गरेको छ नै, बैंकसँग जनताको पहुँच पनि बढाएको छ। यस अतिरिक्त जनताको सहभागिता र स्वामित्वमा लाखौ लाख सुरक्षित निजी आवास पुनर्निर्माण सम्भव छ भन्ने देखाएका छौं। यो मोडेल विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत अनुकरणीय हुन सक्छ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा प्राप्त उल्लेखित उपलब्धीहरु विगतमा विभिन्न चरणमा धेरै खालका चुनौतीहरुलाई पार गर्दै प्राप्त भएका हुन्। पुनर्निर्माणका विगत चार वर्षमा हामीले राजनैतिक अस्थिरता, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहका सरकारहरुको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु परेको अवस्था र पछिल्लो चरणमा कर्मचारी संयोजन जस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको तथ्य यहाँहरु सबैमा अवगत नै छ। हामीले माथि उल्लेखित लगायतका अनेकौ समस्या र चुनौतीहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै समाधान गर्दै अघि बढेका छौं ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका बाँकी अवधिमा पनि हाम्रा अघि केही चुनौतीहरु अझै विद्यमान छन्। यसमा विशेष गरी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्रमा रहेको निजी आवास पुनर्निर्माण, विपन्न वर्गमा परेका लाभग्राहीहरुको आवास पुनर्निर्माण गलत विवरण दिने व्यक्तिहरुबाट रकम फिर्ता गर्नु पर्ने कार्यहरु मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेका छन्।
हामीलाई पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न करिव ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, जसमा यस आर्थिक वर्षभित्र तय गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका निम्ति कम्तिमा ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ। हामीले वित्तीय स्रोत व्यस्थापन लगायतका उल्लेखित चुनौतीहरुको समाधानार्थ गम्भीर ढंगले लागि परेका छौं। छिट्टै यी समस्याहरुको समाधानसहित पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्नेछौं। विपन्न वर्गको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु. ५० हजार थप अनुदान सहित करिब १ हजार जना घुम्ति डकर्मी र सामाजिक परिचालकहरुको परिचालन गर्दैछौं भने सहरी क्षेत्रका निजी आवास तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि विश्व सम्पदा क्षेत्र र परम्परागत बस्तीहरुको गुरुयोजना तयारीसहित विशेष योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदैछन्।
हामी पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरुको सम्पन्नताका साथसाथै हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरुलाई अभिलेखीकरण गरी हाम्रो भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा यो अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाँड्नका निम्ति समेत योजनाबद्ध काम अघि बढाएका छौं। यस सन्दर्भमा आगामी वर्ष हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्देछौं भने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र तथा धरहरा क्षेत्रमा भूकम्प संग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । हाम्रा कार्यहरुको संस्थागत दीगोपनाका निम्ति केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण एवं विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहमा स्थानीय समुदाय एवं पालिकाहरुसँगको सहकार्यलाई विशेष महत्व दिएका छौं।
हामी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुग्दा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु भएका जनताले जीवीकोपार्जनका कार्यक्रमहरुका लागि आग्रह गर्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार बनाएका जनतालाई आर्थिक रुपले सम्पन्न बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसतर्फ सहुलियत ऋण उपलब्धताको सुनिश्चिता गरिएको छ भने विभिन्न दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । थप केही कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउँछौं ।
हाम्रा उल्लेखित प्रयासहरुले विगतमा झैँ हाम्रा अघि देखापरेका चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गरिनेछ । तर यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका सबै कार्य सम्पन्न गर्दै सुरक्षित नेपाल बनाउने अभियानमा यहाँहरुको निरन्तर साथ र सहयोग रहिरहने विश्वास सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।